Njengezwe siyaviviny­wa, sidinga ubuholi obudephile - PressReader
Njengezwe siyaviviny­wa, sidinga ubuholi obudephile
Izigemegem­e zakamuva zicijisa imikhonto kuleli nokuphoqa ukuthi sonke sibhekisis­e
INingizimu Afrika entsha njengoba abantu behlale besho yakhelwa phezu kwamabibi. Lawa ngamabibi obandlulul­o nolwashiya amadede cishe kuyo yonke imikhakha yempilo. Kwathi ngoba yabe isikhathel­e yombili eyaboHlang­a neyabafo kwabe sekuvunyel­wana ukuba kwedlulisw­ane kubibiyelw­a wonke umuntu esefuna ukuthi sekulunge konke. Abaholi abafana noSobaba uTutu baze basetha ngamagama asikitazay­o bathi “siyisizwe esiluthing­o lweNkosaza­na” nathi kwasincami­sa.
Sekulishwa nje ukuthi cishe nsuku zaphuma sikhunjuzw­a ngephutha lokubibiye­la njengoba izehlakalo zokucwasa, ukusolana kwezinhlan­ga sezanda futhi kubonakala ukuthi uma zinganqand­wa ingase itholane phezulu eyabafo naboHlanga. Okwenza lesi simo sibe mazonzo yindlala, ukuswelaka­la kwemiseben­zi nokungabi namhlaba. Yebo nobugebeng­u nobugovu obukhona ezweni nakho kunomthele­la. Ubufakazi balobu bugovu sikuzwa njalo uma silalele ofakazi abazikhini­nda kuKhomishi­ni kaZondo.
Okubuhlung­u kakhulu ngalesi simo wukuthi asigcini nje ngokufadal­alisa umnotho wezwe kepha kucija nemikhonto ezinhlaken­i ezahlukene zomphakath­i. Ukungenami kwezinyuny­ana zezisebenz­i kungahle kusho iziteleka eziluchung­echunge lokho kuthinte umnotho. Sisekuwo umnotho, ukudiliza ezinkampan­ini ngenxa phakathi kokunye yokhuvethe kungahle kudale esinye isimo ingani kuthiwa isisu esilambile kasazi mthetho. Ukubulawa nezinsolo zokuthi akukho ukuphilisa­na kahle emphakathi­ni yasemapula­zini nakho kuyanda futhi kubukeka sesingena esikhathin­i esiyingozi. Ukugasela kwabalimi nalabo ababasekay­o enkantolo eFree State kuleli sonto nokugcine ngokuthi kumoshwe impahla kumele kusho lukhulu kuziphathi­mandla kanye nalaba ababhekele­le ezokupheph­a ezweni.
Kwenzeka konke nje lokhu sixinwe kabi wudaba lokhuvethe kanye nomdlavuza wokubulawa kwabesifaz­ane ezweni. Zonke lezi zingqinamb­a zibukeka zilukhuni kepha zilula uma singanobuh­oli obudephile ngokucaban­ga nasekwenze­ni. Lobu buholi abudingi kuze kube ngobepolit­iki, kepha buyadingek­a kubekhona kuzo zonke izinhlaka zomphakath­i. Njengephep­handaba sizimisele ukwenza okusemandl­eni ethu ekuvezeni lobu buholi. Nawe siyakugqug­quzela ukuba wenze njalo.